UDebbie Wasserman Schultz usongela amaPolisa eCapitol ngophando - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko UDebbie Wasserman Schultz usongela amaPolisa eCapitol ngophando lwabasebenzi be-IT
UDebbie Wasserman Schultz usongela amaPolisa eCapitol ngophando lwabasebenzi be-IT
Umfazi weCongress Debbie Wasserman Schultz.MANDEL NGAN / AFP / Getty Izithombe
NgoFebruwari 2017, Debbie Wasserman Schultz ’s Umsebenzi ophambili we-IT, u-Imran Awan, uxelwe njengophantsi kophando kulwaphulo-mthetho ngokubiwa kwezixhobo kunye nedatha. UAwan kunye nabanye abasebenzi batyholwa ngokufikelela kwiikhompyuter ngaphandle kwemvume. Akukacaci ukuba yeyiphi idatha ebiweyo nokuba zeziphi izizathu zokophula umthetho. Kwindibano yamva nje yohlahlo lwabiwo mali namapolisa ase-US Capitol, u-Debbie Wasserman Schultz wanyanzelisa umphathi wamapolisa wase-US ukuba abuyise izixhobo zakhe ezathathwa ngamapolisa njengenxalenye yophando emva kokuba ifunyenwe ifihliwe kumngxuma wesakhiwo se-ofisi yeNdlu. .
Ke ukuba ilungu lithi kukho izixhobo ezilahlekileyo, kwaye uzifumana, zingabuyiselwa kwilungu? UWasserman Schultz ubuziwe, esithi izixhobo kufuneka zibuyiselwe kuye ngaphandle kophando kuba umnini wezixhobo (zakhe) ayingombandela wophando. Uye wongeza, andiqondi ukuba inokwenzeka njani loo nto. Izixhobo zamalungu zizixhobo zamalungu. Ukuqonda kwam kukuba amaPolisa aseCapitol akakwazi ukuthimba izixhobo zamalungu xa ilungu lingekho phantsi kophando. Sisixhobo sabo kwaye kufanele ukuba sibuyiswe.
Umphathi wamapolisa wase-US Capitol uphendule wathi, ndicinga ukuba kukho iimeko ezixhasayo kule meko, kwaye ndisebenza ngengcebiso yam kunye nabasebenzi abafunekayo, ukuba kunjalo, kwaye ngemvume yophando, emva koko siza kubuyisa izixhobo . Kodwa kude kube kwenzeka oko asinakubuyisa izixhobo.
UWasserman Schultz emva koko woyikisa inkosi. Ndicinga ukuba wophula imigaqo xa uqhuba ishishini lakho kwaye kufuneka ulindele ukuba kuya kubakho iziphumo. Akucaci ukuba uWasserman Schultz ukholelwa ukuba ezo ziphumo mazibe yintoni, njengoko umphathi wezonxibelelwano engavumi ukubonelela uMfowni wemihla ngemihla ngezimvo malunga notshintshiselwano.
Umnxeba wemihla ngemihla ixelwe Zeziphi izixhobo uWasserman Schultz awayefuna ukubuyela kuzo: Umsebenzi waseburhulumenteni onolwazi ngale meko nocela ukungachazwa uxelele iDaily News Foundation's Investigative Group ukuba abasemagunyeni beNdlu bavala uImran Awan nabantakwabo, ilaptop esetyenziswa nguImran ifihliwe kumjelo ongasetyenziswanga weSakhiwo seOfisi yeRayburn House. Iofisi kaWasserman Schultz iseLongworth House Building Office, isakhiwo esahlukileyo. Ikhompyutheni yafunyanwa kamva ngamapolisa aseCapitol kwaye yathathwa kuba yayifanelekile kuphando lolwaphulo-mthetho, utshilo umthombo.
Uphando luka-Awan ngomnye wemicimbi emininzi yezomthetho ehlasela uDebbie UWasserman Schultz . Uye wachongwa njengommangalelwa ngokubambisana ngokuqhubekayo Ityala lesenzo seklasi ifayilishwe egameni labaxhasi bakaBernie Sanders malunga nokuqhekezwa kwe Unyulo lwedemokhrasi , Kwaye elinye ityala lesenzo leklasi lafakwa ngaphezulu kweKomiti yeSizwe yeDemokhrasi eyabanzima abaninzi babaququzeleli bentsimi ukuba bahlawule umvuzo wabo emva kokuba i-1 yezigidi zeebhonasi zinikwe yiKomiti yeNdibano yeSizwe yeDemokhrasi. OwayenguSihlalo we-DNC uDebbie Wasserman Schultz usenokuba urhoxile kwisikhundla sakhe NgoJulayi 2016 emva kwemizamo yakhe yokonakalisa uSanders wavezwa kwii-imeyile ezikhutshwe nguWikileaks, kodwa i IDemokhrasi Ukusekwa kuvuze ukunyaniseka kwakhe ngokungqinelana naye. U-Barack Obama, u-Joe Biden, iNkokheli yamaNcinci kwiNdlu u-Nancy Pelosi, kunye no-Hillary Clinton bakhankasela egameni lakhe ekhokelela kumceli mngeni wakhe wokuqala wokuqala ngo-Agasti 2016. Iphulo likaClinton kwangoko uqeshiwe ukuba asebenze njengosihlalo obekekileyo wenkqubo yelizwe engama-50. Emva UClinton ilahlekile kunyulo kuTrump, uWasserman Schultz wayenjalo oqeshwe ngoFebruwari 2017 kwiKomiti yoHlahlo lwabiwo mali yeNdlu kwaye bavunyelwe gcina isikhundla sakhe kubunkokheli bendibano yeDemokhrasi njengesekela-sotswebhu eliyintloko. Uye wabonakaliswa ngamajelo eendaba amaninzi njengesithethi seDemocratic Party, ngaphandle kwezigidi zabavoti bembona njengesahlulo esahlulekayo sikaHillary Clinton sokungaphumeleli konyulo olunyanzelwe kubavoti beDemokhrasi ngobunkokeli beqela.
IArc yokugqibela 'yeeMfazwe eziManyeneyo' kukuphela kweXesha le 'Star Wars'
Ngaba 'umcuphi oyinyani' iseFranchise esebenzayo yeHBO?
Ukutshutshiswa kushiya abaphulaphuli kwiXesha elidlulileyo lePain
I-'Wrecked 'Cast Cast Teases Stakes ezinkulu kwiXesha lesi-2
Yimalini itikiti ledisney
phinda ujonge ukujonga iselfowuni nakubani na
Iklabhu yokucheba kaharry okanye yedola
Ngaba kuya kubakho ezinye iimuvi zeemfazwe ezibalaseleyo
Eyona ndlela yokujonga iinombolo zefowuni